အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံပြောလာ ခဲ့ ပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်ပေမယ့် အဖမ်းမခံရ တဲ့အကြောင်းကို အမှန်အတိုင်းပြော လိုက်တဲ့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)…. – Shwe Naung
အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံပြောလာ ခဲ့ ပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်ပေမယ့် အဖမ်းမခံရ တဲ့အကြောင်းကို အမှန်အတိုင်းပြော လိုက်တဲ့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)….
N N | August 1, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ်လှစွာ သော ပရိသတ် ကြီးရေ သုသုလို့ အများက ခေါ်ကြတဲ့ မိတ်ကပ် ညီညီမောင် ကတော့ အမေစုကို ချစ်ခင်သူ တစ်ဦးပီပီနွေဦးတော်လှန်ရေး အစပိုင်းမှာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီမှ ဆန္ဒထုတ် ဖော်တဲ့ အနုပညာရှင် တွေကိုဖမ်းဆီးအရေး ယူတဲ့အခါမှာတော့
သုသု တစ်ယောက် ပျောက်ခြင်း မလှ ပျောက်သွား ခဲ့ ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီက ကျင်းပတဲ့ သင်္ကြန်ပွဲကို သွားရောက် ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ လိုင်းပေါ်မှာ ပလူပျံ ခဲ့စဉ်က လက်ရှိရိုက် ထားတာမဟုတ် ကြောင်း အသေအလဲ ငြင်း ဆန်ခဲ့သူပါ..။
မကြာခင် မှာပဲ အမှန်တရားပေါ် ထွက်လာတဲ့ အတွက် ဘယ်လိုမှ ငြင်းမရတော့ဘဲ ဝန်ခံလိုက် ရပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း နေထိုင်စားသောက်ရင်း အခုချိန် ကျမှ ကိုဗစ် ရောဂါ အတွက် လိုအပ်တဲ့ အကူအညီ တွေ
လှူဒါန်းရင်းလူဝင် ဆံ့လာအောင် ကြိုးစားနေ ပါပြီ။ ” ဆန္ဒတွေပြပြီး အဖမ်း လည်း မခံရဘူးနော် “ ဆိုတဲ့ comment တစ်ခုကြောင့် အရှိုက်ထိ သွားပြီး ပြန်ဖြေ ရှင်းလာခဲ့ပါတယ်..။
“ ခံဝန်ထိုးရပါတယ် အဖမ်းမခံ နိုင်လို့ သင်္ကြန် သွားရပါတယ်။ ခုချိန်ထိ ကျွန်မ ကြောင့် ဘယ်သူမှ ဒုက္ခမ ရောက်သေးပါဘူး ဘယ်သူမှ ထောင်မ ကျပါဘူး ဒါ့ကြောင့် အပြင်မှာ ကိုယ်တတ်နိုင် တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီ ပေးလို့ ရနေပါတယ်။ ” ၊ ” ဘယ်သူက အဖမ်းခံချင်မှာလဲ ခုအပြင်မှာ နေရလို့ ကူညီနိုင် တာလေး ကူညီ လို့ရ တယ်လေ
နိုင်ငံရေးကိုယ် ကျိုးမဖက်ဘဲ လုပ်နေသူ တွေကို အရမ်းလေးစားပါတယ်။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ် ဖရိုဖိုင် လော့ချပြီး လိုက်အော် နေတဲ့လူတစ်ချို့ကိုတော့ အရမ်း ရွံတယ်” လို့ ပြန်ပြော ထားပါတယ်။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင် တဲ့နေ့ လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ပါစေလို့ ဆုမွန် ကောင်းတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ….
နန်းမွေစံရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……
နန်းသီရီမောင်ရဲ့ ဆွဲမက်စရာ ပုံရိပ်လေးများ…….
သံသာမိုးသိမ့်ရဲ့ အသည်းယားဖွယ် ပုံလေးများ……
အထာကျကျ ပိုစ့်တွေပေးပီး ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ၀င်းရွှေရည်သင်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်‌လေးများ…….
အလန်းစား ဖက်ရှင်နှင့် အထာကျကျ မိမိုက်နေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အကြမ်းစား ပုံရိပ်‌လေးများ……..
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဆက်ဆီကျကျ အလှတရားများကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ၀င်းရွှေရည်သင်းရဲ့ ပုံလေးများ……..
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနှင့် အထာကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ မှုံနံသာ၀င်းမောင်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်‌လေးများ…….
သဇင်ရဲ့ပရိတ်သတ်မသိသေးတဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ အေးသီတာရဲ့ ဗီဒီယိုလေး…….